Madaxweyne Xasan Sheekh”Dib ayaa loo soo celin doonaa lacagta shilin Soomaaliga ah Dhawaan – Radio Muqdisho
Madaxweyne Xasan Sheekh”Dib ayaa loo soo celin doonaa lacagta shilin Soomaaliga ah Dhawaan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka hesho Miisaaniyad xadidan beesha Caalamka, isagoo dhanka kalena sheegay in la soo-saari doono lacagta Shilin Soomaaliga ah ee dalkeenu leeyahay.
Dhinaca kale Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay xal waara ka gaari doonto Cabashooyinka ka taagan maamulka Jubba.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku howlan tahay sidii ay xal uga gaari lahayd cabashooyinka Arrimaha barlamaanka maamulka KMG Jubba isla markaana, guddi Arrimahaas xallin doonana dhawaan howshaasi ay billaabi doonaan.
“waxbadanaa ka qabsoomay xallinta arrinta barlamaanka Jubba horay in loo socdo ayaan diyaar u nahay, xallintaas waxaa ku mashquulsan aniga oo ah madaxweynaha Soomaaliya Xukuumadd Soomaaliya iyo barlamaanka, dhawaanna xal waara ayaa loo heli doonaa” ayuu yiri Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Wasaaradda Waxbarashada oo sheegtay in 15'ka bishaan loo fariisan doono Imtixaanaadka Dugsiyada sare ee dalka